Global Voices teny Malagasy » Boky vao navoaka, manolotra ireo endrika zara raha nanaovana fikarohana momba ny tetezamita politika sy ny fampahalalam-baovao ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2019 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Boky iray vaovao navoaka  tamin'ny Jona 2019 no manolotra fampahafantarana feno momba ny tantara sy ny toerana misy ny tontolon'ny fampahalalambaovao ankehitriny ao Myanmar.
Ilay boky, mitondra ny lohateny hoe “Fampahalalalambaovao ao Myanmar mandalo tetezamita: ireo Lova, Fanamby ary Fiovàna” dia niarahan'i Lisa Brooten, Jane Madlyn McElhoe, ary Gayathry Venkiteswaran namoaka. Nahitàna ny fiarahana nifandrimbona  teo amin'ireo manampahaizana ao Myanmar, ireo mpikaroka, mpikambana anaty vondrom-piarahamonina sivily, mpanakanto ary mpanao gazety izay nanoratra momba ny fiantraikan'ny tetezamita politika tany amin'ny fahalalahana maneho hevitra tao amin'ny firenena ilay boky.
Myanmar, fantatra fahiny tamin'ny anarana hoe Birmania, dia teo ambany fifehezan'ny tafika nandritra ny am-polo taona maro  mandra-pametraka ny fanovàna tamin'ny 2010; izay nahafahana nametraka fitantanana sivily indray. Na izany aza, mbola nitoetra nibahan-toerana hatrany ny tafika teny anaty fitantanan-draharaha. Tamin'ny 2015, nisy fifidianana natao nanerana ny firenena ka nandresy  lavitra tamin'izany ilay mpanohitra teo aloha National League for Democracy  (NLD) notarihan'i Aung San Suu Kyi, ilay nahazo ny Loka Nobel .
Tanisainy ny krizy Rakhine izay miresaka ny fitomboana sy ny fiparitahan'ny herisetra anaty fiarahamonina  izay niteraka fifindran-toerana olona an'arivony maro avy amin'ny foko Rohingya tany avaratra-andrefan'i Myanmar. Ampiany ihany koa hoe ny asan'ireo mpanoratra ilay boky dia mifantoka amin'ireo endriky ny tetezamita politika izay tsy mbola nisy fanadihadiana hafa nandalina azy tany aloha:
Betsaka ireo fepetra noraisina raha resaka fiovàna politika ary fony tonga teo amin'ny fitondrana ny governemanta NLD, avo be ny fanantenana hahita fiovàna azo tsapain-tànana ho an'ny fampahalalambaovao sy ny fahalalahana maneho hevitra. Nefa araka ny voamarik'ireo maro nandray anjara, na nisokatra aza ny habaky ny fanehoankevitra, tsy nihena ny fampitahorana atao amin'ireo mpanao gazety sy mpikatroka. Ny mifanohitra amin'izay aza, ny fampiasàna ireo lalàna, na izany ny Andininy faha 66(d)  amin'ilay Lalàna momba ny Fifandraisandavitra na ny Lalàna Famaizana, ny Lalàna momba ireo Fikambanana tsy Ara-Dalàna ary ny Lalàna momba ny Tsiambaratelo Ofisialy, dia samy mampiseho fa ny tetikady nataon'ny fitondrana teo alohany ihany no ampiharin'ilay governemanta voafidy tamin'ny fomba demaokratika.
Nametraka olana io ho an'ny fampivondronana ireo loharano isankarazany izay itarafana  ihany koa ny toerana misy ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao:
Efa navoaka  tao Yangon, Myanmar ary Bangkok, Thailand ilay boky. Afaka raisina  ety anaty tambajotra ihany koa ilay boky sy ireo toko voafantina avy aminy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/31/142301/
 teo ambany fifehezan'ny tafika nandritra ny am-polo taona maro: https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2016/03/31/a-brighter-dawn-in-burma-myanmar-not-yet-a-democracy-but-no-longer-a-dictatorship/
 National League for Democracy: https://en.wikipedia.org/wiki/National_League_for_Democracy
 herisetra anaty fiarahamonina: https://globalvoices.org/2012/06/16/understanding-the-violence-in-western-myanmar/
 Andininy faha 66(d): https://advox.globalvoices.org/2018/03/21/saynoto66d-documenting-the-surge-of-online-defamation-cases-in-myanmar/